Ukulingwa kwamahhala kwe-Sling TV kwezinsuku ezingama-30 - Novemba 2020 (Kuqinisekisiwe) - Ezokuzijabulisa
Ungasithola Kanjani Isilingo Samahhala Se-TV?
I-Sling TV isabalele ngevidiyo ye-inthanethi isevisi yokusakaza . Le webhusayithi ikuvumela ukuthi ubuke i-TV ebukhoma kuwo wonke amadivayisi wakho. Isayithi lidumile e-United States. Kungomunye wabokuqala ebhizinisini ukunikela ngamakhasimende ithelevishini esezingeni eliphezulu ngamanani aphansi. Nge-sling TV manje usungabuka i-cable TV mahhala usebenzisa isilingo sabo samahhala. Insizakalo yethelevishini yaseMelika ephezulu kakhulu iphethwe yinethiwekhi ye-Dish TV.
Lewebhusayithi ibilokhu ikhona kusukela ngo-2015 futhi isishintshe ngokuphelele indlela abantu abasebenzisa ngayo ezokuzijabulisa. Namuhla sizobe sibheka ukuthi singabhalisela kanjani ukubhaliswa kwamahhala.
Mayelana ne-Sling TV - Imininingwane emfushane nesingeniso
ISling.TV iyinsizakalo engaphansi kwenethiwekhi yokudla futhi ibilokhu itholakala kusukela ngo-2012. Iyathandwa ngaphezu kwensizakalo yethelevishini ephezulu ye-inthanethi. Iqale ekuqaleni njenge-Discworld futhi inikeze ukusakazwa oku-inthanethi kubasebenzisi. Itholakala kuzo zonke izifunda ezingama-50 e-USA. Iwebhusayithi isingathwa kuwo wonke amanethiwekhi omhlaba. Inhloso yesayithi ukunikeza ukuzijabulisa kwekhwalithi kubasebenzisi bayo. Izinsizakalo zale webhusayithi zenziwe zatholakala nge-Roku TV namadivayisi okusakaza.
Ubambiswano lusize ukuletha i-TV bukhoma emsamo. Abasebenzisi abanebhokisi lokusakaza babhalisele ngokuzenzakalela okubhaliselwe kwe-Sling TV. Ngisho nanamuhla, iwebhusayithi ihlangene nezinsizakalo eziningi zokusakaza ezifanayo. Babuye babambisana nezinkampani ezinkulu ezifana I-Disney , Amanethiwekhi e-A & E, namanethiwekhi we-Scripps ayasebenzisana ukuletha ukuzijabulisa okuningi kuwebhusayithi. Yikhaya elingenakubalwa bukhoma iziteshi ze-TV nama-movie.
Landa Okwe-iOS Landa Okwe-Android
Izinyathelo Zokuthola Isivivinyo Samahhala se-Sling TV:
I-Sling TV inikeza amakhasimende ayo isivivinyo samahhala sezinsuku ezingu-7. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ungayihlola insizakalo yabo ngaphambi kokubhalisela isivumelwano sonke. Landela lo mhlahlandlela ukuze isivivinyo sakho samahhala sinikwe amandla kudivayisi.
Idivayisi ozoyisakaza kufanele ibe nohlelo lokusebenza lwe-TV lokulingisa seluvele selufakiwe. Ngaphandle kwesikhulumi, landa uhlelo lokusebenza kudivayisi yakho. Udinga ukubhalisa ngeplatifomu ehambisanayo ukuthola lokhu kunikezwa. Njengamanje, ngohlelo lwamahora ajabulisayo, ungabhalisela futhi kusuka kusiphequluli sewebhu kwi-PC yakho.
Ku-PC noma iLaptop yakho, yiya kokulandelayo isixhumanisi . Ekhasini eliyisiqalo uqobo, uzothola inketho yokubhalisa.
Faka imininingwane yakho efanele, uqale ngesilingo samahhala sezinsizakalo ze-Sling TV. Njengamanje, udinga kuphela ukuhlinzeka ngekheli lakho le-imeyili bese ukhetha iphasiwedi ukusebenzisa amahora ajabulisayo ngemuva kokuthi ubhalisele i-akhawunti vele ungene kuhlelo lokusebenza kudivayisi yakho ethile.
Izici ze-Sling TV:
Kunokusetshenziswa okuningi ongakuthola kumasevisi we-Sling TV. Iwebhusayithi ingaba wusizo kubantu abaningi. Ngaphambi kokuba ubhalisele isivivinyo sayo samahhala, ake sibheke izici ezinikezwa yiwebhusayithi.
1. Faka esikhundleni i-Cable TV
Uhlelo lokusebenza lwe-Sling TV lungasetshenziswa shintsha ukubhaliswa kwakho kwekhebuli ye-TV yendabuko . Inani leziteshi ezibukhoma nama-movie asepulatifomu likwenza ukwazi ukwaneliseka ngokuphelele. E-United States, inawo wonke amanethiwekhi athandwayo wethelevishini. Kwake kwaba yinsizakalo yokuncoma efana nokubhaliselwa kokuzijabulisa okuku-inthanethi njengeNetflix, iHulu, neNdunankulu Video.
2. Ukusakazwa Kwencazelo Ephezulu
I-Sling TV inikeza abasebenzisi ngezinsizakalo zokusakaza ezisezingeni eliphakeme. Ngesevisi yokusakazwa kwe-HD, ungabuka kalula okuqukethwe okuvela nxazonke zomhlaba ngo-1080P nangaphezulu. Lokhu kuyathandeka impela futhi kuhlangabezana namazinga we-2020. Kukhethwa yiwo wonke umuntu ukuthi bangathola ukusakazwa okungenani kwe-HD namuhla.
Izinsiza ze-Sling TV ziyahambisana namadivayisi amaningi aku-inthanethi. Uma ubhalisile, ungangena kwiwebhusayithi kuwo wonke amapulatifomu. Amanye amafomethi athandwa kakhulu kuzoba yi-PC, iOS, Android, PS4, Xbox One, AmazonTV, Roku TV, nezinye eziningi. Lokhu kutholakala okuhambisanayo kuwo wonke amapulatifomu kukwenza kudume kakhulu kubantu abaningi.
4. I-Cloud DVR
Isici sefu se-DVR sikuvumela ukuthi ume isikhashana ithelevishini ebukhoma online. Ingasetshenziswa futhi ukurekhoda imibukiso yakho ye-TV oyithandayo efwini. Kuzuzisa ikakhulukazi abasebenzisi abavame ukuba matasa. Sebenzisa lesi sici uma ungafuni ukuphuthelwa yimidlalo ye-TV ejabulisa kakhulu. Sonke sisesimisweni esimatasa kulezi zinsuku. Zama isici se-Cloud DVR ukuzwa ithelevishini esezingeni eliphakeme.
5. Izinhlelo zokusebenza
Izinsiza ze-Sling TV zitholakala kalula emhlabeni jikelele ngezinhlelo zokusebenza eziningi. Kunezinguqulo eziningi ezahlukahlukene zohlelo lokusebenza ezitholakalayo njengamanje. Amadivayisi ahlukahlukene asekela izinsiza anohlelo lokusebenza kuwo. Ungazilanda kalula zonke kuwebhusayithi esemthethweni. Ngempela kulula ukusetha futhi akudingi ulwazi oluningi lobuchwepheshe.
Isikhathi Sokujabula Sling TV:
Uhlelo lokusebenza lwe-Sling TV kanye newebhusayithi bakhiphe uhlelo lwamahora ajabulisayo. Uma ucabanga ukuthi wonke umuntu ubhajwe ngaphakathi emakhaya abo, sekube nzima kakhulu ukuhlala ujatshuliswa. USling uthathe lesi sinyathelo ukuhlinzeka abathengi ngezokuzijabulisa ezisezingeni eliphakeme kulezi zikhathi ezinzima. Uhlelo lwehora lokujabula lunikeza abasebenzisi ukufinyelela kwamahhala kuzo zonke iziteshi ze-TV kusuka ngo-5 PM kuya phakathi kwamabili. Lesi yisikhathi esiphakeme kakhulu lapho abantu bebuka khona ithelevishini ngokuvamile. Manje njengoba sonke sinamathele ekhaya, kuyefana, kepha ngokungangabazeki kuyisinyathelo esinesibindi senhlangano. Amahora wokujabula angadutshulwa kakhulu kwezokuzijabulisa kwamahhala ngalesi sikhathi sokuhlukaniswa.
Ngalesi siqondisi, besinethemba lokuhlanganisa yonke imininingwane edingekayo mayelana ne-Sling TV. Landela imihlahlandlela ehlukene enikeziwe ukuze uthole umuzwa ohamba phambili kuwebhusayithi nakuzinhlelo zokusebenza. Abantu abavela e-USA bangajoyina ipulatifomu ukuze bajabulele i-TV ebukhoma yamahhala. Isici sehora lokujabula ngokungangabazeki sisiza imindeni eminingi ukuthi ihlale iphilile. Hlala uphephile futhi uhlale ekhaya ngenkathi ujabulela ukuzijabulisa kwamahhala kwekhwalithi nge-TV yokulingisa.
I-Sling TV vs YouTube TV - Yikuphi Okuhamba phambili?
INetflix vs Hulu - Umhlahlandlela Wokugcina
Amasayithi Womculo Ovinjiwe 2020 - Lalela Umculo Nomaphi
I-15 Best Final Cut Pro Windows Alternatives (2020)